Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Migraine (2) မိုင်ဂရင်း (၂)
24 Jul 10, 20:42
Dear doctor, I would like to ask youaquestion regarding headache. I know ofacase ofaperson having migraine and it is very painful till she feels like vomiting. I would like to know why headache will cause vomiting. Is it serious? What kind of illness it that? Look forward to your advice.
မဖြစ်ခင် သတိပေးသလို လက္ခဏာတွေ အရင်လာတတ်တယ်။ အအိပ်ပျက်တာ၊ စိတ်တိုချင်တာ၊ အားယုတ်တာ၊ စိတ်ဓါတ် ကျတာ၊ သန်းတာ၊ အချို-အငန် ချင်ခြင်းတတ်လာတာ။ ၂ဝ% လောက်မှာ Migraine aura ဆိုတဲ့ နိမိတ်တွေက ခေါင်း မကိုက်ခင် ကလေးမှာ ဖြစ်ဖြစ် တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ဖြစ် ပေါ်တယ်။ အလင်းရောင် စူးစူးရှရှတွေ ဖြင်ရတယ်။ မြင်ကွင်းရဲ့ အလည်ကနေ စပြီး၊ အလည်ခေါင်မှာ ဘာမှ မမြင်ရတဲ့ အပေါက်လိုလည်း ပါသေးတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒါမျိုးသာ ဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းဆက် မကိုက်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ တခါဖြစ်တာ ၂၄ နာရီ ကြာတဲ့နောက် အားအင်တွေ ဆုတ်ယုတ်ပြီး၊ အသံတွေ၊ အလင်းတွေ သိပ်မကြည့်ချင်၊ မကြားချင် ဖြစ်လာတတ်တယ်။